China Custom logo Fanamboarana boaty firavaka vita tanana vita amin'ny vita amin'ny vita amin'ny vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita kady | Huaguang
Custom logo Fanamboarana boaty firavaka vita tanana vita amin'ny vita amin'ny vita amin'ny vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita fanaarangaly mirary
Mpanamboatra boaty firavaka miaraka amin'ny fitaratra
Ny vita sy ny famokarana boaty firavaka dia mifototra amin'ny famoronana firavaka. Ny atitany amin'ny ankapobeny dia namboarina tamin'ny elanelam-potoana maro mba hisorohana ny rotra tsy ilaina vokatry ny fifandraisan'ny firavaka. Ny boaty firavaka sasany dia miovaova amin'ny firafitra anatiny arakaraka ny endrika sy fitaovana manokana. Ny fampiasana lehibe ny boaty firavaka, mba hitazomana ny firavaka maharitra toy ny vokatra vaovao fisehoana, manakana ny vovoka sy ny poti-drivotra amin'ny harafesina sy ny fitafiana ambonin'ny firavaka, ary manome ny mpanangona firavaka koa tia toerana tsara horaisina.
Matetika nopetahany fitaovana malefaka izy io ary misy kofehy fanoherana ny okididia sy anti-akanjo hisorohana ny fanaovana firavaka. Ny lakile na fitambarana mihidy amin'ny fomba mifanentana dia entina hiarovana ny fiarovana ny firavaka. Ity boaty firavaka taratasy ity dia natao indrindra hanangonana ankizy kely kojakoja kely, ka tsy misy hidin-trano. Boaty firavaka taratasy, sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana, tsara kokoa ny vidiny. Ny endrika mavokely koa dia mifanaraka amin'ny fon'ny zazavavy kely, toy ny hoe miaraka amin'ity boaty firavaka ity dia zazavavy kely tsara tarehy. Ity fody kely boaty ity dia kely, nefa manana ny asany ilaina rehetra izy:
Natao hiarovana sy hiarovana ny peratra sarobidy anao, ny peratra peratra dia matetika mirakitra andiana sponjy sponjy pad. Ankoatra ny peratra dia safidy tsara koa ny cufflink na kavina.
Ny liner fanenomana kavina / kavina fikolokoloana dia ampiasaina hanamboarana sy hiarovana ireo kojakojam-peonao. Matetika izy io dia omena lavaka kavina amin'ny fizarazaran-tany hitazomana ny kavina, na amin'ny kofehy fametahana kavina amin'ny alàlan'ny toeran'ny fonosana boaty, na amin'ny fonosana azo esorina misy lavaka kavina ao amin'ny efitrano.
Ny lamba firakotra lolo dia matetika flannelette misy karatra lolo naorina anaty efitrano handrakofana ny firavakao sarobidy. Ny karatra lolo dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny fangejana, fa azo ampiasaina ihany koa mba hamonosana ny rojo lava sy manify hialana amin'ny fivezivezena tampoka; Na mihetsika toy ny sosona, manasaraka ny trinket avy any ambony.
Watch Wrap / bracelet Wrap dia natao hiarovana sy hiarovana ny fehin-tànana na fiambenana.
Fehiloha rojo no ampiasaina hiarovana sy hiarovana ny fehin-tànanao rojo, mazàna amin'ny endrika clasp na clasp. Ity manaraka ity dia mazàna namboarina miaraka amina paosy elastika misokatra hitazonana ny rojo amboara.
Ny goba dia natao tamin'ny habe sy endrika isan-karazany, mba hametrahana misaraka ny firavakao sarobidy. Ny rojo lava sy manify dia matetika natao ho an'ny rojo, fa ny toradroa kosa dia natao ho an'ny bracelet, brooches, kavina, hairpins, cufflinks ary kojakoja hafa miankina amin'ny habe sy ny alokaloka.
Iza ny zazavavy kely tsy ho tia boaty firavaka toa izao?
Teo aloha: Boaty kilalao ho an'ny ankizy valizy taratasy baoritra misy tanany
Manaraka: Ny boaty fitehirizana taratasy na birao an-trano misy afovoany lehibe azo aforitra
Karazana firavaka boaty zazavavy firavaka firavaka ...
Baoritra makiazy boaty na boaty firavaka misy fitaratra ...